“အတွေးစလေးတွေ”: ဘလော့ဂ်ဒေး - ၂ ( တက်ဂ်ပို့စ် ) . . .
ခင်မင်စရာ ဘလော့ဂါတွေပါကလား .. ဘလော့တော်တော်များများမှာ ကိုကြီးကျောက်ရဲ့ကွန်မန့် လေးတွေ သဘောကျလို့သူ့ ပေ့ခ်ျလေးမှာ စာသွားသွားဖတ်တုန်ုး ဗြုန်းဆို ပျောက်သွားတော့ ကိုယ်တောင် မျက်ရည်စို့ လို့အခုထိ ဟာတာတာ ဖြစ်နေရသေးတယ် .. ဆက်ရန်လေးကိုစောင့်နေပါရစေ ဆရာရေ ...
ကျနော်လည်းမပါဘူး တော်ပြီ အိပ်တော့မယ် ။
27 August 2011 at 07:52
ဘလော့ဂ်ဒေး တက်ဂ်ပို့စ်ကို ဆက်အားပေးသွားတယ် ဦးဟန်ကြည်ရေ။ စာတွေဖတ်ရင်းတွေးမိတယ် ဘလော့ဂ်ဂါဘဝကို ရောက်ခဲ့တာကြောင့် အခုလိုစာကောင်းပေကောင်းတွေ ဖတ်ခွင့်ရသလို မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့ ချစ်ခင်ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့တယ်။ စိတ်ပျော်ရွှင် ကြည်နူးမှုကိုခံစားရတယ်။
နောက်ဆက်တွဲမှာမှ မပါလို့ကတော့..ဟွင်းဟွင်း...နောက်တစ်တွဲ ဆက်ဖတ်မယ်လို့..
ဘကျောက်ကတော့ အဲလို အမှတ်တရကို ဖြစ်နေဦးမှာပါ... ပို့စ်တွေ့ သေချာဖတ်ပြီးသူ့နံမည်ကို အဲဒီထဲကအတိုင်း ၊ ခေါင်းစဉ်အတိုင်း နံမည်ပေးတတ်တာလေး လွမ်းလိုက်တာ။
သူဂျီးမင်းအကြောင်းတော့ မပြောနဲ့တော့.. ဘကျောက်ရေးသမျှ သူ့ကို ဦးအောင်မန့်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မနည်း၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ..ဇတ်လိုက်ကျော် ဆရာဟန်ကြည် ရယ်...မွေးနေ့မှာ ဒုတိယ ရပြီး ဘာမှ မစားရလို့ စိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့ ... ဒီကောင်လည်း ပထမ ရပြီး ရေတောင်မသောက်ရပါဘူးဗျာ..။
"မင်္ဂလာပါဆရာ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ" ငယ်ငယ်တုန်းကလေ ဆရာအတန်းထဲဝင်လာရင် မတ်တပ်ရပ်ပြီး လက်ပိုက်ကာ တစ်ပြိုင်ထဲ ဆိုရတယ်လေ။ အခုလည်း မင်္ဂလာပါဆရာလို့ ဦးစွာပြောလိုက်ပါရစေ။
အပေါ်က အနီရောင်နဲ့ စာနှစ်ပိုက်က မှတ်သားစရာကောင်းလှပါတယ်ဆရာ။ ဘုန်းဘုန်းက အဲဒီလိုတောင် မတွေးမိတာ အမှန်ပါ။
By names နဲ့ဆိုတော့ ဘုန်းဘုန်းလည်း ခပ်ဖြန်းဖြန်းလေး တစ်ခေါက်ကြည့်လိုက်တယ်။ ကိုယ့်နာမည်ကို အရင်ရှာကြည့်လိုက်တာပေါ့။ တွေ့လည်းတွေ့ရော I was very glad and happy when I had seen my name လို့ ပြောရတော့မယ်ဆရာ။ ပြီးမှ လုံးစေ့ပါဌ်စေ့ သေသေချာချာ ပြန်ဖတ်လိုက်တယ်။ ရက်စွဲမပါလို့။ ရက်စွဲပါလည်း သေချာဖတ်မလို့။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ပုဂံပိုစ်လို ဖြစ်မှာစိုးလို့ လေးလပိုင်းတုန်းက သွားထားမှန်းမသိ။ အခုမှ သွားမှန်းမသိနဲ့။
နာမည်ပါသွားပြီဆိုတော့ ဒီညတော့ Sleep well ပြီထင်ပါ့။
ဆရာရေ အိန္ဒိယပညာရေးအတွေ့အကြုံကို ဘယ်လို စရမှန်းမသိတာနဲ့ ခုထိ မရေးဖြစ်သေးတာပါ။ ဆရာတိုက်တွန်းထားတာကိုလည်း နှလုံးသားတစ်ဒေါင့်တစ်နေရာမှာ လုံခြုံစွာ သိမ်းထားမိပါရဲ့။
စင်္ကာပူမှာတုန်းက ခနက်ရှင်အရမ်းကောင်း၊ အရမ်းမြန်လို့ ဓာတ်ပုံတွေကို စိတ်ကြိုက်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကျန်တဲ့မလေး၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အိန္ဒိယတွေမှာတော့ သူမသာ ကိုယ်မသာပါပဲ။ (အတူတူပဲလို့ ဆိုလိုတာနော်)
သူများတွေ ခရီးသွားဓာတ်ပုံတွေ တင်ထားတာတွေ့ရင် အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ ဥပမာ အခု ဆရာတင်ထားတဲ့ ပုဂံကပုံလေးတွေဆိုရင် ထပ်ခါထပ်ခါ ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ဘုန်းဘုန်းလည်း ဘုန်းဘုန်းရဲ့ခရီးသွားဓာတ်ပုံတွေကို တစ်ယောက်တစ်လေတော့ နှစ်သက်မိနေလောက်ပါရဲ့ဆိုပြီး တင်လိုက်တာ။
အင့် စာရှည်သွားပီ။ တော်ဦးမှ။ အဆက်ကို မျှော်နေမယ်နော်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ...
အမှတ်တရ နာမည်လေးပါလို့ ပျော်ထှာနော်... ဘယ်ရမလဲ မပါလို့ကတော့ တဂ်ပို့စ်တွေ တအားကိုတဂ်ပစ်မှာ...:):) အကိုရေ စောင့်မျှော်အားပေးလျှက်ပါလို့..
ဆရာဟန်ကြည်ဟူသော သူကို သတိထားမိသည်မှာ ကြာခဲ့လေပြီ။ ဟိုနားသွားတွေ့ ဒီနားသွားတွေ့နဲ့ သူ့ခြေရာချည်း ထပ်နေသည်မို့ ဒီလူက အတော် စာဖတ်ဝါသနာပါသားဟု စိတ်တွင်း မှတ်ရုံသာ မှတ်ခဲ့၏။
အမှတ်မထင် ဘကျောက်၏ ခြေထောက်ကိုဆွဲ တွဲလွဲပို့စ်နှိုက် နှာတစ်ဖျား အသာဖြင့် ပထမကွန်မင့် နေရာယူခဲ့မိသည့်အတွက် ကြံဖန်ပြီး သူ့အား အားနာမိလိုက်သေး၏။
ထိုမှ နောက်တွင်တော့ သူကြီးမင်း၏ ပို့စ်အောက်နှိုက် ဘလော့လင့်ခ် မပါသည့် ဟန်ကြည်ဟူသော ကွန်မင့်လေးများ မကြာမကြာ တွေ့လာရလေရာ ဒီလူ ဘလော့တစ်ခုခုများ ရှိလေမလားဟူသော အသိဖြင့် ဟန်ကြည်ဟု ဂူးဂဲလ်အတွင်းနှိုက် ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ရာ ဆရာဟန်ကြည်၏ နေကာမျက်မှန်တပ်ထားပြီး လွယ်အိတ်ကို စလွယ်သိုင်း လွယ်ထားသည့် ဂိုက်ပေး ဆိုက်ပေးကာ ရိုက်ထားသော ဓါတ်ပုံကြီးကို ဘွားကနဲ မြင်လိုက်ရသည့်ခဏ ... အိမ်းးးးး ငါလို တောသားဂိုက်မျိုးတစ်ယောက်တော့ ဘလော့လောကထဲ ၀င်ရောက်လာချေပြီကော... ကောင်းလေစွ.. ကောင်းလေစွ။ ငါဘဲ တောပိုကျမလား သူဘဲ တောပိုကျမလား ဟူရွေ့ စိတ်တွင်း တေးမှတ်ထားမိလေတော့၏။
ထိုမှနောက်တွင်တော့ သူ့ဘလော့ကိုယ်လည် ကိုယ့်ဘလော့ သူလည်ဖြင့် အပေးအယူမျှတ သွားကြကာ ဘလော့လောကပေါ်နှိုက် တောသားလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီး နှစ်ယောက် မီးကုန်ယမ်းကုန် သောင်းကျန်းနေကြလေတော့သတည်းပေါ့။း))))
သတင်းအမှန်အကန် ကြားရသည်မှာ ဆရာဟန်ကြည်သည် သူ၏ မဟေသီကို ချစ်လွန်လွန်းရွေ့ ကြောက်ချင်ယောင် ဆောင်လာရာမှ ဟန်ဆောင်လွန်လာပြီး အမှန်တကယ် ကြောက်သွားတော့သည် ဟူသတ်။
သူကြီးမင်း ချီးမြှင့်သည့် ဒုတိယဆုကြီးကို ယူဆောင်လာပြီး အိမ်က မဟေသီအား ပြုံးပြုံးမိန့်မိန့်ကြီးဖြင့်.. မဒမ်ရေ.... ငါ ဒုတိယ ရလာတယ်ဟ ဟူရွေ့ မျက်နှာ လုပ်ကြည့်လိုက်ရာ....
မဟေသီက... ဟင်းးးးး ဒုတိယဘဲ ရခဲ့သလား။ မဒမ်တို့က ပထမမှ ကြိုက်တာ။ ပထမမရရင် အိမ်ပြန်မလာခဲ့နဲ့လို့ ပြောထားတာ မမှတ်မိဘူးလား.... သွား.. သွား.. ဒီည အိမ်မှာ လာမအိပ်နဲ့ဟူရွေ့ နှင်ထုတ်လိုက်လေရာ... မျက်နှာ ငယ်ငယ်ဖြင့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏ အိမ်နှိုက် သွားအိပ်ရလေသတ်။
သူငယ်ချင်းက မဒမ်နဲ့ အဆင်မပြေလို့ ဒီမှာ လာအိပ်တာလားဟု မေးလေရာ ... ဟာ မဟုတ်ပါဘူး။ မဒမ်က ငါပြီးရင် ပြီးတာပါဘဲ။ ကိစ်စမရှိပါဘူး။ ဒီည အိမ်မှာ ကွန်နက်ရှင် သိပ်မကောင်းလို့ မင့်အိမ်မှာ အင်တာနက် သုံးရင်း မင်းနဲ့လဲ စကားပြောရင်း အေးအေးလူလူနေရအောင်လို့ ဒီမှာ လာအိပ်တာပါ ဟု မုသားမပါ လင်္ကာ မချော ညာပြောလိုက်ရလေသတတ်။
ပိုပြီး ခိုင်မာသည့် သတင်းမှာ ယခု ဘလော့ဒေး အမှတ် ၂ ကို ထို သူငယ်ချင်းအိမ်နှိုက် နေထိုင်ရင်း သူ့စကားနဲ့ ညီအောင် ရေးလိုက်ရသော ဟူ၏။
ထိုအဖြစ်အပျက်တို့အား ကအစ အ အဆုံး သိရှိသည့် မိုးယံသည် ဆရာဟန်ကြည်အား သနားသွားကာ.. ဆရာရယ်... အားမငယ်ပါနဲ့။ ပထမဆုရလဲ ဘာမှ မထူးပါဘူး။ အဲဒီ သူကြီးမင်း စုချတာကို.. အဲလေ.. ဆုချတာကို ပထမဆု အနေနဲ့ ကျနော် ရရှိခဲ့ပေမဲ့ ရေတောင် တိုက်ဖော်မရပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် ပထမဆုကို ဆရာ့ကို ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ ဘာမှ သုံးစားလို့လဲ မရဘူး။ ဒီလိုလုပ်ဆရာ.. အခု ပြိုင်ပွဲက ဆုတံဆိပ်တွေက သုံးစားမရလို့ ပထမဆုကို မယူခဲ့တာပါ၊ နောက်ဆိုရင် ပထမဆုယူပြီး မဒမ့်လက်ထဲ ဂွက်ကနဲ အပ်ပါ့မယ် ဆိုပြီး ဆရာ့ မဟေသီလေးကို နားသွားချချေဆရာ.. ဟူရွေ့ ဖျောင်းဖြလိုက်ရသော ဟူသတည်း။ ဟီး ဟီး ဟီး။
သိပ်ပျော်နေတယ်။ ဟာ ဟ။
ဖိတ်ဖိတ် မဖိတ်ဖိတ် သွားလိုက်ဦးမယ်
ဆရာရဲ့ အပိုင်း ၂ကတော့အရမ်းဖတ်ကောင်း
ကိုမောင်မျိုးရယ်...ဆန္ဒစောသကိုး...လာဖတ်မှာမှန်းသိလို့ နောက်တစ်ပုဒ်စောင့်ဖတ်အောင် သေချာချန်ထားတာကို စိတ်ကောက်တော်မူရသလား...ဒါမို့ မစွံတာ...ဟား ဟား...
ဟုတ်တာတွေ တော်တော်ပြောတတ်နေပါကလား...အိမ်ရှင်မနဲ့ကို ပြန်တိုင်မှပဲ ဖြစ်တော့မယ်နဲ့တူတယ်...တောဘယ်သူပိုကျသလဲလို့တော့ မပြိုင်ပေါင်ဗျာ...ဦးဟန်ကြည်တို့က ပြိုင်လာရင် အရှုံးပေးပြီးသား...ဒါမျိုးဆို သူကြီးက ပထမ...ဟား ဟား...
အသစ်လေးတွေကိုလည်းမခွဲမခြားတတ်၊မာနမကြီးတတ်တဲ့ ဆရာတို့လိုစီနီယာကြီးတွေကြောင့်ကျနော်တို့အားတက်နေခဲ့ တာပါဗျာ။အမြဲတမ်းဒီလိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့နေသွားနိုင်ကြပါစေ လို့ဘလော့ဂါဒေးမှာတိုင်တည်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဆရာ။
တကူးတက ဖိတ်မန္တက ပြုမှ လာဖတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘလော့တွေပေါ် မရောက်အားပေမဲ့ ရီဒါထဲကနေ တိတ်တခိုး ဖတ်နေကြောင်းပါ။ အလုပ်ဘယ်လောက် ပင်ပန်းပင်ပန်း မအိပ်ခင် ပို့စ်အသစ်တက်လာတာလေးတွေ ဖတ်လိုက်ရမှ အပမ်းပြေ အနွမ်းပြေ သွားပြီး နောက်တနေ့အတွက် အားတွေရှိသွားတော့တာပဲ။
မအားလို့ ကွန်မန့်မရေးနိုင်တာကိုတော့ ခွင့်လွှတ်ပါရှင်။
ကျမကတော့ ခုချိန်မှာ ကဗျာဥာဏ် စာဥာဏ်တွေလဲ ဝေးနေသလို ဖြစ်နေပါပြီ။ ရေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုသာ အားကျရင်းးးးး လက်ထဲရောက်လာတဲ့ ကပြောင်တပုဒ်တော့ ချရေးလိုက်ပါရစေအုံး ...
ဆုံးနိုင်မှပဲ ... ။ ... ။
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လာဖတ်သွားပါတယ် ဆရာရေ. . .
ဆရာဟန်တို့ကတော့ တွဲ အဲ... အတွဲလေးတွေ အခန်းဆက်လေးတွေနဲ့ စိတ်ရှည်ရှည် ရေးနိင်တာပဲ။
ကိုယ်သိနေတဲ့သူတွေအကြောင်းဆိုတော့ ဖတ်ရင်းနဲ့ သတိရမိ ပြုံးမိတယ်။ ကိုကြီးကျောက်ကတော့ ဘယ်သူမှ မမေ့နိင်သေးကြပါဘူး။ မမေ့နိင်လောက်အောင်လည်း နေ ထိုင် ခဲ့တာကိုး။
Blog တွေလည်း များလာသလို အားလုံးကလည်း သူ့နည်းသူ့ဟန်လေးနဲ့ ဖတ်လို့ကောင်းနေတာပါဘဲနော်
အသစ်တွေအဟောင်းတွေ အားလုံးကို စာလိုက်ဖတ်ရတာ အားလပ်ချိန်ကို အသုံးချခြင်း တစ်မျိုးပါဘဲ။ ဘာလဲဖြစ်ဖြစ် ဘလော့လောကက ပျော်စရာကောင်းပါတယ်နော် ဆရာ
သြော်.. .ဆရာဦးဟန်ကြည်က အသေးစိတ်ကို ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ညှင်းညှင်းပြီး ရေးသကိုး... ဟိုမှာ မောင်မျိုးတော့ စိတ်ကောက်သွားလေရဲ့... :D.. အိပ်တော့မယ်ဆိုပဲ... ဟားဟား.. ကျေးဇူးပါ ဆရာရေ... ကျွန်တော့်စာတွေကို အချိ်န်ကုန်ခံဖတ်ပေးတဲ့အတွက်..း))
28 August 2011 at 03:06
ဦးဟန်ကြည်ရေ၊ အခုလို ကျကျနနနဲ့ စီကာပတ်ကုံး ရေးပေးတာ ကျေးဇူးဗျို့၊ နောက်ကျရင် ကိုအောင်(သရဲနိုင်ငံ)လို့ ကျနော် နာမည်ပြောင်းရင် ကောင်းမယ် .... :P
ဆက်ရန်ကို မျှော်နေမယ် ....
28 August 2011 at 05:13
သတိတရ ဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ဆရာ။
ဘလောက်ဒ်ဒေးပို့စ် နှစ်ပိုင်း လုံးကိုဖတ်သွားပါတယ်
ကျံနေသေးတဲ့ပိုစ့် တွေကိုတော့ အကြွေးမှတ်ထားပေးအုံးနော် နောက်နေ့တွေမှပဲ
ဘလော့ဒေးအမှတ်တရပိုစ့်လေးကို ကြည်နူးစွာ ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘလော့စာမျက်နှာလေးတခုပေါ်မှာ ရင်းနှီးစွာနဲ့ ဆက်လက်ရှင်သန်ကြဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ဆရာ့ဘလော့ဂ်ကို ကိုကြီးကျောက်ဘလော့ဂ်ကနေ ရှာတွေ့ခဲ့တာ။ အဲဒီမှာ ဘာကြောင့်ရယ်တော့မသိ စစချင်းမှာ ဦးဟန်ကြည် ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြည့်ပြီး စဉ်းစားမိတာက အသားဖြူဖြူဖွေးဖွေး တရုတ်ကြီးလို့ ထင်မိတာပါ။းP ။ နောက်မှတလွဲစီဖြစ်နေတော့တယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် စဉ်းစားပြီး ရယ်လိုက်ရတာ… :P ။ ဆရာ့ဘလော့ဂ်ကို ဟိုးအရင်ကတည်းက ဖတ်ဖူးပါတယ်။ တိတ်တိတ်ကလေးဖတ် တိတ်တိတ်ကလေးပဲ ပြန်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ ဆရာရေးခိုင်းထားတာ မမေ့ပါဘူးဆရာရေ။ ခမာပြည်အကြောင်းရေးစရာတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ရည်ရွယ်ထားတာတွေ ရှိပေမယ့် အချက်အလက်လေးတွေ သေချာအောင် စုဆောင်းချင်လို့ပါ။ သူများနိုင်ငံအကြောင်းရေးတာဆိုတော့ တခုခုလွဲချော်သွားရင် မကောင်းဘူးမဟုတ်လား။ ဖြည်းဖြည်းတော့ လာပါမယ်ဆရာ။
လာထား..အဖြူရောင်နတ်သမီး နာမည် အခါ၁၀၀လောက်..း)